दक्षिण कोरियामा अफ्रिकन स्वाइन फ्लूले महामारी लिन थालेपछी उच्च सतर्कता जारी – Kantipur Press
दक्षिण कोरियामा अफ्रिकन स्वाइन फ्लूले महामारीको रुप लिन थालेको छ । सोमबार उत्तर कोरियाको सिमा नजिकै मृत फेला परेको जंगली बनेलमा अफ्रिकन स्वाइन फ्लू भएको प्रामाणित भएपछी सरकारले उच्च सतर्कता जारी गरेको हो । त्यस्तै जंगली जनावरमा समेत स्वाइन फ्लू देखापर्न थालेपछी स्थिति नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान नदिन सैनिक परिचालन गरी सम्पूर्ण जंगली बनेलहरु मार्ने कृषी मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।
“नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेका जंगली जनावरले रोग छिटो फैलाउने सम्भावना उच्च हुन्छ ” एक सरकारी अधिकारीले भने । यो सहित कोरियामा स्वाइन फ्लूका कारण मृत भेटिएको बदेलको संख्या पाँचौ हो । यसभन्दा पहिला ख्याङ्गिदो तथा इन्छन क्षेत्रमा स्वाइन फ्लूका कारण १४ वटा बुङ्गुर मरिसकेका छन् ।सरकारले प्रभावित क्षेत्रका बिभिन्न फारम बाट लाखौँको संख्यामा बुङ्गुर मारिसकेको छ ।
कस्तो छ कोरिया ? अप्ठ्यारो परे कहाँ सम्पर्क गर्ने ?
कोरिया नेपाल अनलाइन खबर,सौल: दक्षिण कोरिया गणतन्त्रात्मक देश हो । यसको राजधानी सोल हो । कोरियाको अरु प्रमुख शहरहरु बुसान, इन्चोन, डाइजोन, ग्वाँङजु हो । मुख्य भाषा कोरियन हो । तर अंग्रेजी भाषा पनि त्यत्तिकै प्रयोग हुन्छ । कोरियाको मुद्रालाई वन भनिन्छ । सय वन बरावर झण्डै ९ रुपैयाँ १९ पैसा हुन्छ ।
यो विनिमय दर अमेरिकी डलरको भाउको उतारचढावसँगै तलमाथि हुने गर्छ । दक्षिण कोरियामा बौद्ध र क्रिश्चियन धर्म मान्नेहरुको बाहुल्यता छ।कोरियामा जाडो मौसम चिसो र सुख्खा हुन्छ । गर्मीमा भने ओसिलो र तातो हुन्छ । नेपालले इपिएस प्रणाली अन्तर्गगत रोजगारीको लागि सन् २००८ देखि नेपाली कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो । इपिएस कोरिया शाखाका अनुसार सम्झौता हुनुअघि आफ्नै तरिकाले झण्डै १ हजार कामदार कोरिया गएका थिए । कोरियामा अहिले झण्डै ६० हजार नेपाली कामदार छन् । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत नेपाली युवा औद्यागिक क्षेत्रमा काम गर्छन । २० प्रतिशत युवा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्छन ।
रोजगारीका लागि कोरिया जान कोरियन भाषा जान्न जरुरी छ । त्यसैले नेपाल सरकारले लिने रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेले मात्रै कोरियामा रोजगारी पाउँछन् । भाषासँगै सिप पनि सिक्न जरुरी छ । भाषा परीक्षा र सिप वापत एचआरडी कोरियाले तोकेको न्यूनतम शुल्क तिनुपर्छ ।रोजगारीका लागि कोरिया पुगे पछि युवाले चार वर्ष १० महिना काम गर्न पाउँछन् । भाषा परीक्षा पास गर्ने सबै युवा कोरिया जान पाउँदैनन । किनभने भाषा परीक्षामा कोरियाले माग गरेको कामदारको संख्या भन्दा निक्कै बढी पास हुन्छन ।
दक्षिण कोरियामा नेपालको दूतावास राजधानी सोलमा छ |कुनै समस्या परेमा सोलस्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरे सल्लाह र सहयोग पाइन्छ ।37-24, Sungbuk-dong, Sungbuk-gu, Seoul:-Tel. No. 0082 (02) 37899770/1,Fax No. 0082 (02)7368848:Email:seoul@mofa.gov.np,nepembseoul@yahoo.com,Website:nepembseoul.gov.np,www.www.nepembseoul.or.krआप्रवासी कामदार सहयोगका लागि कोरियामा माइग्रेन्ट वर्कस सेन्टरले वहुभाषिक परामर्श समर्थन सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । आप्रवासी कामदारलाई भाषा र संवाद सम्बन्धी अप्ठयारो परेमा आप्रवासी सहायता नम्वर १६४४–०६४४ मा सम्पर्क गरी नेपाली भाषाको लागि १२ थिचेर आफ्ना समस्या राख्न सकिन्छ ।
न्यूनतम तलव ज्याला नदिएमा वा ढिला गरेमा, आप्रवासन र प्रवास सम्बन्धी समस्या परेमा, रोजगार परमिट प्रणाली विषयमा, औद्योगिक दुर्घटना भएमा, अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा, मृत्यु र कर्मकाण्ड, ठगी, आक्रमण, नागरिक मुद्दा साथै अन्य समस्या राख्न सकिन्छ । सेवा फिर्ता कल – सेवा कल फिर्ताको लागि आफ्नो फोन नम्बर छोड्न नभुल्नुहोला।फोन गर्ने समयावधि:-सोमवार – शुक्रवार बिहान ९:०० – बेलुका ६:००,आइतवार दिउसो १:०० – बेलुका ७:००,लन्च समय दिउसो १२:०० –१:०० बजे सम्म:-शनिवार र आधिकारिक बिदाहरुको दिन केन्द्र बन्द रहनेछ ।सबैलाई काम लाग्ने भएको हुँदा हरेक कोरियामा रहेका र आउन लागेका तथा तयारी गरिरहेका हरु माझ पुर्याउन सक्दो सेयर गरिदिनुहोला ।
अनलाईन सपिङ बाट कोरियामा नेपालीहरु ठगिदै,अनलाईन स्क्यामिङ्गको कोरियामा बिगबिगी ! होशियार!!